शीर्ष Best भारतमा सर्वश्रेष्ठ अनलाइन अवधि बीमा योजनाहरू - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र बी २ बी बजार समाचार
शीर्ष Best सर्वश्रेष्ठ अनलाइन बीमा योजना भारतमा
मार्च 12, 2021 मार्च 12, 2021 BimaKaro एशिया, एशिया फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, एशिया थोक र B2B, ब्लग, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, भारत, भारत फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, भारत थोक र B2B
एजोन लाइफ आईटर्म योजना एक उच्च दावी बस्ती अनुपातको साथ आउँदछ जुन यसले अत्यन्त आकर्षक योजना बनाउँछ।
आईसीआईसीआई प्रू आईप्रोटेक्ट स्मार्ट टर्म योजना एक धेरै प्रतिस्पर्धी मूल्यको योजना हो र वर्षौंको अवधिमा लगातार दावी बस्ती अनुपात भएको छ।
इंडियाफर्स्ट लाइफ ई – टर्म योजना एक गैर-लि linked्क गरिएको, गैर-सहभागी, अनलाइन टर्म बीमा योजना हो जुन अत्यधिक किफायती छ।
एक अवधि योजना अनलाइन खरीद सबैभन्दा समझदार विकल्प हो यदि तपाईं आफ्नो बीमाबाट अधिकतम मान निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। टर्म योजनाहरू जीवन बीमा योजनाहरू को सब भन्दा आधारभूत प्रकार हो। अवधि बीमा योजनाहरू जीवन बीमा द्वारा छनौट गरेको निश्चित अवधिको लागि कभरेज प्रदान गर्दछ। यदि लाइफ एश्युर्ड पॉलिसी अवधिमा मृत्यु भयो भने यो नीति अझै सक्रिय छ, मृत्युभनीलाई लाभार्थीलाई भुक्तान हुनेछ। अवधि बीमा बीमा को सबै भन्दा सस्ती तरीका हो।
उत्तम अवधि बीमा योजनाहरू निम्न प्यारामिटरहरूसँग तुलना गर्नुपर्दछ:
दावी बस्ती अनुपात
नीतिको खरीद प्रक्रियाको क्रममा प्रदान गरिएको सेवाको गुणस्तर।
प्रतिक्रिया र उत्पादन समीक्षा ग्राहकहरु बाट खरीद गरीएको छ जसले अनलाइन नीति खरिद गरेको छ।
अनलाइन खरीद गर्दा प्रक्रियाको सादगी।
शीर्ष Best सर्वश्रेष्ठ अनलाइन अवधि बीमा योजनाहरू:
१. एजोन लाइफ आईटर्म योजना एक अनलाइन टर्म बीमा योजना हो। यो एक गैर-भाग लिने, गैर-लिंक गरिएको योजना हो जुन १०० वर्षको उमेरसम्म व्यापक कभरेज प्रदान गर्दछ। यस योजनाले महिला र गैर धूम्रपान गर्नेहरूलाई कम प्रीमियम दर प्रदान गर्दछ। एजोन लाइफ आईटर्म योजना एक उच्च दावी बस्ती अनुपातको साथ आउँदछ जुन यसले अत्यन्त आकर्षक योजना बनाउँछ। मुख्य सुविधाहरू र लाभहरूको रूपमा, जीवन बीमाकृतको मृत्युमा, यो योजना तीन अलग विकल्पहरू छनौटको साथ आउँदछ। यो योजना यसमा निर्मित गंभीर रोगका लागि सवारको साथ आउँदछ, जसले नीतिले समेटिएको एउटा महत्वपूर्ण रोगको निदानमा प्रीमियमको छुटलाई सुनिश्चित गर्दछ।
अधिकतम जीवन स्मार्ट अवधि योजना को योजना को रूपहरु को लागी केहि शर्तों अन्तर्गत एक समर्पण मूल्य को बोक्छ।
२. आई आई आई सी आई आई प्रु आइप्रोटेक्ट स्मार्ट टर्म योजना धेरै प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यको योजना हो र वर्षौंको बखत दाबी बस्ती अनुपात भएको छ। भुक्तानी हुने प्रीमियमको दरहरू अत्यन्तै उचित छ, र यो योजना धेरै सुविधाहरूको साथमा आउँदछ। महिलालाई प्रीमियमको विशेष दरहरू प्रस्ताव गरिन्छ, र यो योजनाले गर्भाशय ग्रीवा वा स्तन क्यान्सर जस्ता महिलाहरूलाई मात्र विशेष रोगहरू समेट्छ। यस योजनाले आत्मसमर्पण बेनिफिट लिन्छ जबकि यो एकल भुक्तानी नीतिमा मात्र सीमित छ। जीवन बीमाकृतको मृत्युको अवस्थामा मृत्यु बेनिफिट बाहेक, जीवन बीमाधारकले भोगेको स्थायी अपाability्गताको मामलामा, भविष्यका प्रीमियमहरू पूर्ण रूपमा माफ हुनेछन्। आईसीआईसीआई प्रो आईप्रोटेक्ट स्मार्ट टर्म योजना प्रमुख सुविधाहरूसहित आउँदछ, जसले तीन प्रकारका योजना विकल्पहरू र लाइफ स्टेज बेनिफिटहरू समावेश गर्दछ जहाँ तपाईं जीवनको चरणका माइलस्टोनहरू ध्यानमा राख्दै कभरेज बढाउन सक्नुहुनेछ जस्तै बच्चाको जन्म, विवाह आदि। यस योजनाले एड्स, जुन प्राय जसो योजनाहरू द्वारा बहिष्कृत गरिएको छ। यस योजनाले वैकल्पिक लाभहरू पनि प्रदान गर्दछ जस्तै दुर्घटनात्मक मृत्यु र गम्भीर रोग।
Can. क्यानरा म प्लस टर्म योजना चयन गर्दछु एक व्यक्तिगत गैर-लिंकन गैर-पार शुद्ध जोखिम प्रीमियम जीवन बीमा अवधि योजना हो। यस योजनाको साथ, तपाईं विभिन्न कभरेज विकल्पहरू र लाभहरू पाउन सक्नुहुनेछ जस्तै लाइफ, लाइफ प्लस र जीवन प्रीमियमको फिर्ताको साथ। तपाई जीवन स्तरको साथ कभरेज स्तर बढाउने र घटाउने विकल्प रोज्न सक्नुहुन्छ। छूट महिला जीवन को कभरेजको लागि साथै उच्च बीमा राशि विकल्पको लागि उपलब्ध छ। अतिरिक्त दुर्घटना मृत्यु र अक्षमता र बाल समर्थन बेनिफिटहरूको लागि अतिरिक्त अन्तर्निर्मित कभरहरू अतिरिक्त प्रीमियमको भुक्तानीमा पनि रोज्न सकिन्छ।
Max. अधिकतम जीवन स्मार्ट अवधि योजना - यो योजना 85 वर्षको उमेर सम्म व्यापक कभरेजको साथ आउँदछ। यो एक गैर-लिंक गरिएको गैर-पार्टिसिपेटेड शुद्ध शुद्ध जोखिम प्रीमियम जीवन बीमा योजना हो जसमा धेरै मुख्य सुविधाहरू छन् जस्तै प्रीमियम भुक्तानीको धेरै मोडहरू साथसाथ भुक्तान, जीवन चरणको माइलस्टोनहरूको लागि बृद्धि गरिएको कभरेज, अवस्थित नीतिधारकहरूको लागि वफादारी छुट र यसका लागि छुट धुम्रपान नपाउनेहरुका साथै उच्च योग बीमाताको लागि छनौट गरियो। यो धेरै फाइदाहरूका साथ पनि आउँदछ जुन बृद्धि भएको वा घटाइएको कभर, आय र मुद्रास्फीति संरक्षकको साथ जीवन कभर समावेश गर्दछ, र एक अनौठो लाभलाई एक्सेलेरेटेड क्रिटिकल इलीनेस (एसीआई) को रूपमा चिनिन्छ बेनिफिट रकम विशेष गम्भीर रोगको निदानमा भुक्तान योग्य हो। यो योजना पनि एक अद्वितीय प्रीमियम ब्याक, अर्थात परिपक्वता मूल्यको साथ आउँदछ, जहाँ भुक्तानी गरिएको प्रीमियम आवश्यक सेस, चार्जहरू आदि घटाएपछि फिर्ता हुन्छ। अधिकतम जीवन स्मार्ट अवधि अवधिमा योजनाको विशिष्ट प्रकारका लागि केही शर्तहरूमा समर्पण मूल्य पनि हुन्छ।
Ed. एडेलविस टोकियो लाइफ - सरल रूपमा संरक्षण एक व्यक्तिगत, गैर-लिंक गरिएको र गैर-सहभागी योजना हो जुन कम लागत र अत्यधिक सस्तो हो। यस योजनाले तपाईले अधिक बीमा र २२ वर्ष भन्दा माथिका महिलाहरूको लागि छनौट गर्ने अवसरमा छुट प्रदान गर्दछ। यो शर्त नीतिले 22० बर्ष भन्दा बढी उमेर सम्म coverage० बर्ष भन्दा बढी कभरेज प्रदान गर्दछ। चार लाभ विकल्पहरू उपलब्ध छन्, जस्तै, लाइफ कभर, लाइफ कभर इनबिल्ट एक्सीडेंटल डेथ, दुर्घटनात्मक मृत्यु र अक्षमतामा भुक्तान योग्य भविष्य प्रीमियमको इनबिल्ट माफीको साथ जीवन कभर, साथ साथै आलोचनात्मक बीमारी।
HD. HDFC-Click6protect-Plus - यो सुविधाहरूको गुलदस्ता सहितको योजना हो। नीति अवधि 40० बर्ष सम्म हो, र त्यहाँ धेरै योजना विकल्पहरू छन् जस्तै लाइफ कभर, अतिरिक्त जीवन विकल्प, आय विकल्प र आय प्लस विकल्प। दुर्घटना, अशक्तता र गम्भीर रोगलाई ढाक्न अतिरिक्त प्रीमियमको भुक्तानीमा थप सुरक्षा लिन सकिन्छ। लाइफ स्टेज प्रोटेक्शनको विकल्प पनि उपलब्ध छ, र तपाईं जीवन चरण घटनाहरू प्राप्त गरिसकेपछि तपाईं प्रीमियम घटाउन सक्नुहुन्छ। अंडरराइटि policy नीति दिशानिर्देशहरूको आधारमा, केही योजनाहरूको लागि समर्पण मूल्य उपलब्ध छ। यो योजना एक अनलाइन छूट यदि अनलाइन खरीद प्रदान गर्दछ।
India. इंडियाफर्स्ट लाइफ ई m अवधि योजना एक गैर-लिंक गरिएको, गैर-भाग लिने, अनलाइन टर्म बीमा योजना हो जुन अत्यधिक किफायती छ। तपाईं high० करोड रूपैयाँ भन्दा कभरेज रकमको लागि आफैलाई बीमा गर्न सक्नुहुन्छ र उच्च सुरक्षात्मक आवरण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नीति सर्तहरू १०-50० वर्ष देखि 10० बर्ष उमेर सम्मका हुन्छन्। त्यहाँ चार अलग-अलग योजना रूपहरू छन् - जीवन लाभ, आय लाभ, आय प्लस बेनिफिट र आय प्रतिस्थापन लाभ। तपाईंले थप दुर्घटना शिल्ड बेनिफिट, डिसेबिलिटी शिल्ड बेनिफिट, क्रिटिकल इलिनेस प्रोटेक्टर बेनिफिट वा विस्तृत बेनिफिटको लागि अप्ट इन गर्न सक्नुहुन्छ। यो योजना, पनि, एक अनलाइन लाभ प्रदान गर्दछ, र प्रीमियम कम हुन सक्छ यदि अनलाइन खरीद गरियो।
P. पीएनबी मेटलाइफ मेरा टर्म योजना एक शुद्ध संरक्षण जीवन अवधि बीमा योजना हो जसले जीवन आश्वासन पाएको परिवारको पूरा कभरेज सुनिश्चित गर्दछ। यदि तपाईं एक धूम्रपान न गर्ने हुनुहुन्छ भने, तपाईं यो योजना खरीद गर्दा अधिमान्य दरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं निम्न लाभ विकल्पहरू बीच छनौट गर्न सक्नुहुनेछ - मेरा परिवार भुक्तान, मेरा परिवार लाभ र मेरा अतिरिक्त लाभहरू। क्रिटिकल इलिनेस बेनिफिट, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट र गम्भीर बिमारी कभर जस्ता थप राइडरहरू पनि अतिरिक्त प्रीमियम भुक्तान गरेर रोज्न सकिन्छ।
Kot। कोटक ई टर्म योजना Policy यो नीति सबै भन्दा माथि बीमाकर्ताहरूको तुलनामा सबै उमेर समूहहरूमा लागू हुने न्यूनतम प्रीमियम दरहरू प्रदान गर्दछ। नीति अवधि - - years० बर्ष देखि लेकर परिपक्वतामा अधिकतम उमेर540 बर्ष हो। त्यहाँ छनौट गर्न तीन योजना विकल्पहरू उपलब्ध छन् - लाइफ विकल्प, लाइफ प्लस विकल्प र लाइफ सिक्योर विकल्प। यस योजनामा, लाइफ सिक्योर विकल्पमा भविष्यका प्रीमियमहरूको लागि छुट दुवै दुर्घटनाहरू र बिरामीहरूमा लागू हुन्छ, जबकि समान अन्य योजनाहरूमा लागू हुँदैन। तपाईं आफ्नो अवधि बीमा क्रिटिकल इलिनेस बेनिफिट राइडर वा कोटक स्थायी अक्षमता राइडर थप्न सक्नुहुन्छ।
यसमा लग इन गर्नुहोस् BimaKaro.in तपाइँको लागि अब उत्तम योजना प्राप्त गर्न!
सर्वश्रेष्ठ अनलाइन अवधि बीमा योजनाहरू सांप्रदायिक समाचार
BimaKaro.in DJT बीमा ब्रोकरहरू प्रा.लि. को रिटेल बीमा डिभिजनका लागि ब्रान्ड नाम हो। लिमिटेड, जुन भारतमा एक स्वतन्त्र, निजी स्वामित्व वाली बीमा दलाल कम्पनी हो। DJT बीमा दलालहरु दुवै व्यक्ति र कर्पोरेट ग्राहकहरु लाई जीवन र सामान्य बीमा समाधान प्रदान गर्दछ।
T सुझावहरू तपाईले २०२१ मा राउटर किन्नु अघि
T ट्रिक्स - बिहारको प्राइड उनीहरूको प्रतिभाको सहयोगमा माथि उठ्दैछ